Ambohimangakely: lehilahy voasambotra, nanely tsaho amin’ny fanafihana | NewsMada
Ambohimangakely: lehilahy voasambotra, nanely tsaho amin’ny fanafihana
Lehilahy iray nanely tsaho ka lasa nampihorohoro ny mponina no voasambotry ny zandarimaria teny Ambatotokana fokontany Tsarahasina kaominina Ambohimangakely, ny 16 novambra tokony ho tamin’ny 9 ora alina.
Ireo zandary nanao fisafoana amin’ny alina eny an-toerana no nahasambotra azy io. “Mbola teo am-panentanana ireo vatan-dehilahy ny amin’ny fomba fiaraha-miasa amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemnana tany Betafo izy ireo, nandre antso fa misy jiolahy maro manapoapoaka basy ao Ambatotokana”, hoy ny fanazavana. Voalaza fa lasa nandositra ny mponina ka nisy ny nisitrika any am-piangonana, kanefa mbola mitady hiditra hanao amboletra hanafika ilay fiangonana hatrany ireo jiolahy.
“Tonga teny an-toerana ny zandary notarihin’ny kaomandin’ny brigady ka hita fa tsy misy na inona na inona niseho teny ary ireo olona izay tao am-piangonana aza nilaza fa manao alim-bavaka no antony nahavory azy ireo”, hoy ny zandary. Nisy lehilahy iray nandakandaka vavahadim-piangonana talohan’ny nahatongavan’ny zandary ka lasa niala rehefa nahita ny fiavian’izy ireo. Nokarohana io lehilahy io ary tratra. Mbola nilaza ity lehilahy ity rehefa nanontanian’ny mpitandro filaminana fa nisy jiolahy saika hiditra tao am-piangonana ka nanapoapoaka basy. Nolavin’ireo mponina rehetra izay vory maro teo anefa izany filazany izany ka nosamborina ilay lehilahy 40 taona.
“Toa ny faritra rehetra tsy ilaozan’ny mpanao ratsy ny eny Avaradrano. Na izany aza anefa manao ny ainy tsy ho zavatra ireo zandary miara-miasa amin’ny andrimasom-pokonolona misoroka izay mety ho ratsy tsy ampoizina. Miteraka tahotra sy horohoro ho an’ny mponina anefa ny fanelezana tsaho toa izao nataon’ity ranamana ity izao ka natao ny famotorana azy io ary hatolotra ny mpampanoa lalàna tsy ho ela ny raharaha”, hoy ny zandary.
Resaka feo tahaka izao ihany, nisy nanely tamin’ny tambajotra sosialy fa hisy hanafika iny Ambohimalaza sns iny. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny fanamarinana, saingy tsy nisy ny jiolahy mpanafika. Tsy azo amaivanina anefa izany, hoy fanamafisana.